Youth Services | Burlington Community Justice Center | United States
Himilada / Himilada / Qiimayaasha
Caddaaladda Soo Celinta
Guddiga La-talinta Bulshada
Ururada Maalgalinta &amp; Iskaashatada
Dib-u-soo-galid Bulsho / COSA
Wareegyada Maxkamada / RJ Guddiyada
Ku wadista Leysinka Laalista ah (DLS)
Caddaalad isku mid ah
Guddiyada Cadaaladda ee Dib-u-Celinta
Tamarack / Weecinta Daaweynta
Xatooyada Tafaariiqda (RTAP)
Baadhitaanka Dib-u-Celinta ee St. Joseph
Burlington: Magaalo Dib-u-Celin loogu talagalay Dhallinyarada
Dhaqan Celinta Iskuulka
Qeexitaanka Erayada Muhiimka ah
Su&#39;aalaha Badanaa La Is Weydiiyo
Tilmaamaha Cadaaladda ee Isbarbar socda
Barnaamijka Wacyigelinta iyo Badbaadada Maandooriyaha (YSASP)
YSASP waxay siisaa badal nidaamka maxkamada madaniga ah ee dhalinyarada (qofkasta oo da'diisu kayar tahay 18) oo ku xad gudba khamriga da'da yar ee Vermont iyo / ama marijuana. YSASP waxay ka caawisaa dhalinyarada inay fahmaan saameynta isticmaalka maandooriyaha naftooda iyo kuwa kaleba. Barnaamijku wuxuu gacan ka geysanayaa hoos u dhigista halista isticmaalka mustaqbalka, iyadoo isku xirka kuwa loo aqoonsaday inay yihiin heerar sare oo khatar sare leh iyo takhaatiir takhasus u leh isticmaalka maandooriyaha. Shakhsiyaadka loo gudbiyey barnaamijka YSASP waxay dhammaystiri doonaan baaritaanka. Macluumaadka lagu kasbaday nidaamka ayaa loo isticmaali doonaa in lagu hawl galiyo dhallinta si kooban, faragelin waxbarasho. Haddii qofka dhallinta yar ka yar yahay 18 sano, ogolaanshaha waalidka waa lagama maarmaan.
Fadlan raac xiriiriyahan bogga Vermont Court Diversion ee YSASP wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan barnaamijka.
Garsoorka Dib-u-Celinta Dhallinyarada iyo Golayaasha Weecinta Maxkamada:
Aagga maskaxda ee xukuma "hawlaha fulinta" - oo ay ku jiraan cawaaqibyada muddada-dheer iyo xakamaynta kicinta - ayaa ka mid ah kuwa ugu dambeeya ee si buuxda u bislaaday. Dhibaatadu waxay sidoo kale dib u dhigeysaa horumarka maskaxda meelaha muhiimka u ah cilaaqaadka, barashada, xusuusta, abaalmarinta, iyo xoojinta.
Sida laga soo xigtay Louis Cozolino oo ka tirsan Social Neuroscience of Education, "Isdhexgalka aan la leenahay dadka kale wuxuu si toos ah u saameynayaa soo dhaweynta maskaxda si loo qaato khibrado cusub oo wax looga barto." Aqoontaani waxay hagaysaa sida aan ulashaqeyno dhalinyarada howshayada Gudiga Cadaalada Dib udejinta dhalinyarada. Tabaruceyaasheena waa dhalinyaro laftooda waxayna abuuraan jawi soo dhaweyn leh oo leh rajo cad.
Waa kuwan tusaalayaal hal-abuurnimo iyo dariiqooyin la xiriira oo dhallinyaradu wax uga qabteen saameynta ficilladooda ay ku leeyihiin bulshada:
Xisbiga ay dhibaatadu saameysey wuxuu weydiisanayaa in qofka mas'uulka ah uu iskaa wax u qabso ku nadiifiyo Waqooyiga Xeebta maxaa yeelay waa halka ay dhacdadu ka dhacday oo ay beddeleen aragtidooda.
Ugu deeqay dhar iyo waqti kooxda Badbaadinta. U dhiibida waraaqo ay ka sameeyeen wacyigalinta xatooyada tafaariiqda si ay ugu fidiyaan ugana qayb galaan wadahadal xubnaha bulshada.
Hub ama Daroogo Iskuulka?
U qorista qormo warqadda dugsiga ama Fagaaraha Hore ee Baroodhka, sida PSA oo ku saleysan khibradooda iyo waxyaabaha ay qaataan.
Dib u soo celinta ka dib labada dhinac ee mas'uulka ka ah, waxay ku wareejiyaan xigashooyin aan rabshad lahayn ama alaabooyin duban oo ay ku wada abuureen makhaayadooda iskuulka.
Isu-dheellitirka iyo Cadaaladda Dib-u-Celinta (BARJ):
BARJ waxay bixisaa waxqabadyo dib u soo celin ah oo loogu talagalay kaqeybgalka dhalinyarada ee nidaamka cadaaladda dhalinyarada. Markay dhalinyaradu qatar ugu jiraan kaqaybqaadashada nidaamka, BARJ waxay higsaneysaa inay yareyso oo ay baabi'iso kaqeybgal dheeri ah. Dhallinyarada horey uga mid ahayd nidaamka, BARJ waxay siisaa fursado ay ku yareeyaan sababaha halista iyo xoojinta isirrada difaaca ee la yaqaan. Iyada oo loo marayo wadashaqeyn gaar ah Burlington CJC, maaraynta kiiska BARJ iyo adeegyada dib u soo celinta waxaa lala wadaagayaa Waaxda VT ee Carruurta iyo Qoysaska iyo Spectrum Youth iyo Adeegyada Qoyska .
Dhaqan Celinta Dugsiyada
Burlington CJC waxay lashaqeeysaa Dugsiga Degmada Burlington si ay ucaawiso hirgalinta degmo dhan ee dhaqamada Restorative. Shaqadan waxaa haga mabaadi'da soo socota:
Qirayaa in cilaaqaadyadu ay udub dhexaad u yihiin
Waxay hubisaa sinnaanta codka
Waxay carrabka ku adkaynaysaa ficillada “leh,” oo aan ahayn “in” ama “loogu talagalay”
Waxay xoojisaa isla xisaabtanka, mas'uuliyadda, waxayna awood siisaa koritaanka
Waxay taageertaa hawlgelinta firfircoon iyo xallinta dhibaatada wada shaqeynta
Dayactiraya dhibaatada, halkii aad diiradda saari lahayd ciqaabta.
Markay wax khaldamaan xerada, waxaan u baahanahay isbedel ku yimaada jawaabtayada:
Iskuulkii iyo sharciyadii la jebiyey
Cadaaladdu waxay diiradda saareysaa aasaasidda dambiga
La xisaabtanku waa ciqaab
Uu wado khaladka, dhinacii ay khusaysay la iska indhatiray
Shuruucda iyo ujeedadu way ka miisaan badan yihiin in natiijada ka soo baxdaa ay tahay mid togan ama mid taban oo dhinacyada ay khusayso ah
Dadka iyo cilaaqaadka ayaa lagu xadgudbay
Cadaaladu waxay cadeysaa baahiyaha iyo waajibaadka
La xisaabtanka ayaa dayactiraya waxyeelada
Dhammaan dhinacyada sida tooska ah u khuseeya ayaa door ku leh
Khaldame wuxuu mas'uul ka yahay xulashooyinka, hagaajinta waxyeelada, iyo ka shaqeynta natiijo wanaagsan
BCJC waxay siisaa tababaro shaqaalaha iyo macalimiinta Restorative Practice (RP) waxayna kaqeyb qaataan kooxahooda fulinta ee RP. Wadashaqeyntii ugu dambeysay waa iskaashiga aan la leenahay Dugsiga Sare ee Burlington aqoonsiga iyo tababbarka hoggaamiyeyaasha ardayda ee iskaa wax u qabso ugu shaqeyn karaya Guddiyada Dhalinyarada ee Cadaaladda ee Dugsiga. Tani waa hab fiican oo lagu kordhiyo codka ardayda, lagu barto xirfadaha dib u soo celinta, iyo in ardayda kale la siiyo fursad labaad. Ardaydu sidoo kale waxay helaan saacado adeeg bulsho wixii tababar ama adeeg kasta ah oo ay ku dhammaystiraan BCJC. Intaa waxaa sii dheer, waxay ku jiraan barkado mutadawiciin ah si ay uga jawaabaan dhacdooyinka ka dhaca xerada sanadka oo dhan. Guddiyadan ayaa la qaban doonaa iskuulka kadib sanadka gudihiis waana bedelida ka joojinta.
Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan Adeegyadayada Dhallinyarada, fadlan la xiriir Kelly Ahrens, Maareeyaha Barnaamijyada Dib-u-hagaajinta Dhallinyarada (802)865-7169 ama kahrens@burlingtonvt.gov
Daaqada Anshaxa Bulshada
waxaa laqabsaday Paul McCold & Ted Wachtel